isibambo esisodwa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu matte black
Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / WOWOW Isiphathi Esingasiphathi Sombhobho Wendlu yangasese Matte Omnyama
I-wowowfaucet izimisele ukuhlinzeka ngemikhiqizo ephezulu kakhulu futhi engabizi kakhulu emindenini, ilawula ngokuqinile ikhwalithi ukuqinisekisa ikhwalithi, futhi uma unemibuzo ngesikhathi sokusebenzisa, sicela uxhumane nensizakalo yamakhasimende ukuphendula imibuzo yakho.
2320700B imiyalo yokufaka
Umpompi ompompi wokugezela omnyama omnyama 2320700B
Ufuna ifenisha yokudlela yokugezela emnyama emnyama ukuze unikeze ukuphakamisa okuphelele endlini yakho yokugezela? Ungabe usacinga! I-WOWOW ikunikeza inani elihle kakhulu lemali uma usesha leyo faucet emnyama yokuhlobisa imatte ukunikeza ukubukeka okuphelele kwesitayela endlini yakho yokugezela. Uma uklama noma uhlela kabusha igumbi lakho lokugezela, kufanele ukhethe isikulufu sendlu yakho yokugezela ngobuhlakani. Okokuqala, ukuze uvumelane ngokuvumelanayo design yakho yokugezela ngaphambili. Nakanjani kufanele usuvele ufake imishini yakho yokugezela ekwakhiweni kwakho kokuqala kwendlu yangasese. Futhi okwesibili, kufanele ugweme imishini yokugezela yakho yokugezela ukuba ukungena okuvala isabelomali sakho sokugezela, njengoba emiklamo eminingi yokugezela amafulethi angafakiwe.
Kodwa-ke, i-WOWOW ikunikeza ithuba lokuthenga le faucet emnyama yokuhlobisa yekhwalithi ephezulu, futhi ngokuthinta okumnandi ukunikeza indlu yakho yokugezela isitayela esihle oyifunayo. Futhi nokho, ngentengo enhle kakhulu okuyingxenye nje yempahla yokugezela yama-A-brand. Ikhwalithi yokushiswa nge-bath ye-WOWOW nokho ingcono kunaleyo enikezwa yimikhiqizo yama-A. Yingakho i-WOWOW inethemba lokusho ukuthi sinikela ngenani eliphakeme kakhulu lemali ngempahla yethu yokugezela, kanye nalesi faucet emnyama yokugezela.
Ikhwalithi emnyama yokugezela imatte
Njengoba kushiwo, iWOWOW ilwela ukukunikeza inani elingcono kakhulu lemali. Le faucet emnyama yokugezela imnyama nakanjani iyisivumelwano esingcono kakhulu ongasithola lapho ufuna isikebhe sokugeza. Ubuchwepheshe bokucubungula benzelwe ukuba balwele ukuphelela. Ngale ndlela i-WOWOW ikunikeza okungcono, okusebenzayo, nangaphezulu kwayo yonke imishini yokugezela engabizi kakhulu. Izindwangu zokugeza ezinhle kakhulu ezizothuthukisa ikhwalithi yempilo yakho, ukwenza impilo yakho ibe ntofontofo kakhudlwana.
Lobu buhlakani obuhle ozobubona ngokushesha lapho ubamba leli faucet lokugeza ezandleni zakho. Izinto zekhwalithi ezisetshenziselwe le faucet emnyama yokuhlobisa zisezingeni eliphezulu kakhulu. Izinto ezifana ne-zinc alloy ne-zethusi eziqinile ziqinisekisa isibindi sempilo ende. Ngaphandle kwalokho, i-cartridge eqinisekisiwe ye-NSF-engagugi ingumkhiqizo omude futhi. Nge-aerator yayo entsha uqinisekiswa ngokugeleza kwamanzi okuyi-anti-splatter. Futhi ugcine kuze kufike ku-50% wamanzi ngalesi sici esicebisa ukhuni lokugezela olumnyama. Le aerator ingasuswa kalula ngaphandle kokusebenzisa noma yimaphi amathuluzi, ukuze uyihlanze noma usebenzise elinye esikhundleni sayo.
Isikhungo sokugezela esimnyama samathuluzi okugeza
Isikhiphi sendawo yokugezela esiseMatte esimnyama senzelwe ukufakwa okungu-4 inch 3-hole. Isikhiphi sendlu yokugezela emnyama iza nesethi ephelele yezesekeli namathuluzi wokufaka. I-Wowow ngokwesibonelo ibuye icabange ngamagilavu ​​asebenzayo wokufakwa wedwa ngaphandle kokulimaza izandla zakho. Ungafaka kalula le faucet emnyama yokuhlobisa matte ngokwakho kungakapheli imizuzu engama-20 ngaphandle kokudinga ipulangwe ebizayo. Uma udinga eminye imigqa yokuhlinzekwa okwengeziwe, lezi zithengiswa ngokwahlukana ukuze uqede ukufakwa kwakho kwephephe lokugezela konke ngasikhathi sinye.
Isikhiphi sendlu yokugezela emnyama iza ne-lift rod drain Stopper. Le nduku yokuphakamisa eyinkimbinkimbi ingakhipha amanzi kahle, igweme ukumunca izandla zakho. Amanzi ahamba kalula futhi ngaphandle kwemisindo ekhathazayo. Ngokunyakaza okulula nje kwesandla ungavula noma uvale isivimbeli sokukhipha. Ngaphandle kwalokho, isitholi sokukhipha sihlanganiswe kahle ku faucet emnyama yokuthambisa ngaphandle kokuyekethisa kuma-esthetics. Awuboni kahle isibambo esimi kahle futhi kahle ebekwe ngemuva kwefenisha yokugezela emnyama.
Isiteketisi sokugezela esimnyama esimnyama
Umbala omuhle omnyama we-matte wale mpompi yokugezela unikeza ukungezwa kwesitayela cishe kunoma iyiphi indawo yokugezela. Oompompi bezindlu zangasese ngokuvamile bathathwa kancane ngenxa yobukhulu bawo. Kodwa-ke, zinomthelela omkhulu ekuhlobiseni kwakho kwendlu yangasese. Ukubukeka okumnyama okuyingqayizivele nakanjani kuyaziqhelelanisa nama-nickel ajwayelekile abhulashiwe noma izindawo ze-chrome. Inikeza umuzwa wesimanjemanje, ukuthuthukisa isitayela sesimanje sokuhlobisa. Enye inzuzo yale ndawo emnyama emnyama ukuthi kulula kakhulu ukuyihlanza nokuyigcina. Ngeke ubone noma yikuphi ukuphrinta kweminwe engcolile kubhasikidi omanzi wokugezela omnyama.
Ngesibambo esisodwa sompompi omanzi wokugezela omnyama, ungalawula ngokunembile ivolumu yamanzi nokushisa ngesandla esisodwa. Ngale ndlela akudingeki usebenzise izibambo ezimbili ezihlukene, futhi uzovunyelwa ukuthi ulawule ngokunembile amanzi ngesandla esisodwa. Uzoba nesinye isandla sakho mahhala kweminye imisebenzi, njengokuxubha amazinyo noma ukuhlanza ubuso bakho. Ngenxa yalokho, umpompi omanzi wokugezela omnyama uumbene futhi awungeni endaweni ewusizo endlini yakho yokugezela. Ngakho-ke ipayipi lokugezela elimnyama matte liyisengezo sangempela kunoma iyiphi indlu yangasese yanamuhla.
Iwaranti yokugezela emnyama yematte
Kwa-WOWOW siyazethemba ngekhwalithi esiyinikezayo. Siyaqiniseka ukuthi sinikeza inani elingcono kakhulu lemali ongalithola emakethe. Ikhwalithi yethu ayiphikiswa yiningi lama-A brand. Ngenxa yalokho, ama-A-brand amaningi avele anikeze isikhathi sewaranti sonyaka owodwa. Asesabi ukukunikeza iwaranti yeminyaka emi-1 ephelele evimbela ukuvuza, ama-drip, izingxenyana, nokuqeda ukukhubazeka. Njengoba ukwazi ukubona, sizothatha umthwalo wethu wemfanelo. Ngale ndlela akudingeki ukhathazeke ngokulethwa kwamanzi okuqhubekayo ngaphandle kwengozi. Sizothatha ingozi ngokugcwele, futhi uma ipayipi lakho lokugezela lingasebenzi ngendlela efanele, sizokuthokozisa ukufaka ompompi wakho wokugezela omnyama ngomshini omusha sha. Kuyisithembiso sethu kuwe.
Okokugcina, siphinde sikunikeze isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Uma ungeke waneliseke ngombhobho wakho wokugezela omnyama omnyama, sizokunika imali egcwele ngokushesha. Lokho kufakazela ukuzethemba kwethu kumkhiqizo wethu. Inani elandayo lamakhasimende omhlaba, abathengi kanye namabhizinisi, athembela kompompi bethu, hhayi ngaphandle kwesizathu. Sikunikeza inani elingcono lemali, futhi sethemba ukukuqinisekisa nawe.
Izinzuzo zesikhonkwane sokugeza matte esimnyama ngamafuphi:
• Unika i-wow-factor kunoma iyiphi indawo yokugezela
• Ukuqeda kwesitamatisi esimnyama
• Akukho ukuphrinta kweminwe
• Inani elihle kakhulu lemali
• Kulula ukufaka wedwa ngemizuzu engama-20
• Kulula ukuyihlanza futhi kulula ukuyigcina
• iwaranti yeminyaka emithathu
SKU: 2320700B Categories: Amanzi okugeza, Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa Tags: yokugezela imigodi yokugezela, khipha umhlangano, i-intshi isikhungo
9.92 x 7.87 x amasentimitha angu-4.96
I-Life Rod Drain Assembly
Wowow Bathroom Sink Faucet Broned Nickel Wides ...
I-Wowow Centerset Bathroom faucet ene-Pop-Up Dra ...
Wowow Black Bathroom faucet enezandla ezihlukile ...